Madaxweynaha shirkadda Uber oo is casilay - Worldnews.com
Madaxweynaha shirkadda Uber oo is casilay
Madaxweynaha shirkadda tagaasida ee Uber, Jeff Jones ayaa shaqada ka tagaya ka dib markii uu xilkaas hayay muddo lix bilood ka yar.
Ilo ka tirsan shirkadda ayaa BBC-da u sheegay in is casilaaddani ay tahay
"mid aan la aqbali karin"
Waxay sheegeen in Jones uu qoonsaday in shirkaddu ay qof cusub u
Gaari is-wada oo Uber leedahay oo shil galay
Shirkadda leh tiknoolajiyadda tagaasiga lagu kireysto ee Uber ayaa wadooyinka ka saartay gawaarideeda bilaa darawalka ah, ka dib markii uu shil galay mid ka mid ah. Sawiro...
Shirkadda Ubber oo cambaareesay gacan qaad dhexmaray darawaladooda iyo kuwa Koonfur Afrika
Mas'uuliyiinta shirkadda tagaasida ee Uber ayaa cambareeyay gacan qaad dhexmaraya darawalada shirkadooda iyo kuwa tagaasida kale ee ka howgala dalka Koonfur Afrika....
Madaxa shirkadda Uber oo wadahadal la galaya magaalada London
Masuulka cusub ee shirkadda takaasida ee Uber ayaa galinka dambe ee maanta wadahadal la yeelan doona masuuliyiinta waaxda gaadiidka ee magaalada London, si ay uga wada...
Madaxa Uber oo iska casilay xil uu Trump u hayay
Travis Kalanick, oo ah madaxa shirkadda adeegga tagaasida ee Uber, ayaa iska casilay xil uu ka hayay kooxda madaxweyne Trump kala talisa arrimaha dhaqaalaha, ka dib markii...
Uber oo la eedeynayo
Shirkadda tagaasida ee Uber ayaa qiratay inay isticmaasho barnaamij kombiyuutar oo sir ah, kaasoo gacan ka siinaya inay ogaadaan oo ay ka hor joogsadaan maamulayaasha inay...
Dara Khosrowshahi oo loo doortay hogaanka Uber
Shirkadda takaasida ee Uber ayaa hogaanka u dhiibatay Dara Khosrowshahi, arrintaas oo soo afjartay saadaalintii billooyinka socotay ee ku saabsanayd cidda ay shirkaddu...
Shirkadda takaasida ee Uber ayaa hogaanka u dhiibatay Dara Khosrowshahi, arrintaas oo soo afjartay saadaalintii billooyinka socotay ee ku saabsanayd cidda ay shirkaddu magacaabi doonto. Guddiga maamula shirkadda Uber ayaa go'aankaas gaaray Axaddii, sida BBC loo sheegay, laakiin shirkaddu wali si rasmi ah uma shaacinin. Khosrowshahi ayaa badalaya Travis Kalanick oo is casilay...
Uber ayaa lagu amray inay joojiso tagaasida kaligood iswada ee San Francisco.
Uber ayaa lagu amray inay joojiso adeega baabuurta kaligood iswada ee tagaasida ee magaalada San Farancisco, saacado kadib markii ay ka bilowday adeega. Hayadaha California ee sharciyada gaadiidka ayaa u digay shirkadda inay joojiso adeega, oo ay ogolaansho ka hesho gobolka ama ay la kulanto tallaabo sharci. Uber ayaa bilowday inay macaamiisha siiso fursad ay ku doortaan...
Uber oo iibinaysa ganacsigeedii Koonfurta Aasiya
Shirkadda takaasida ee Uber ayaa sheegtay in ay ganacsigeeda Koonfurta Bari ee Aasiya ka iibinayso shirkadda uu xifaaaltanku kala dhexeeyay ee Grab. Tallaabadan ayaa loo arkaa in ay tahay dib u gurasho ay shirkadda Uber ka samaynayso hawlaheedii caalamka, ka dib markii ay ganacsigeedii Shiinahana ka iibisay shirkadda Didi Chuxing oo ay is hayeen. Labada shirkadoodba waxay...
Uber oo hakisay tijaabadii gaariga iswada ka dib markii ay dhimasho dhacday
Shirkadda takaasida ee Uber ayaa sheegtay in ay hakisay tijaabooyinkii gawaarida iswada ee ay ka samaynaysay dhammaan magaalooyinka Waqooyiga Ameerika ka dib markii uu dhacay shil halis ah. Haweenay 49 jir ah ayuu gaari ku dhacay oo dhimatay iyada oo goynaysa waddo ku taalla magaalada Tempe ee gobolka Arizona ee dalka Maraykanka. Inkastoo gawaarida is wadda ay shilal kala duwan...
Ururuka maamula abaalmarinnada Oscar oo kulan degdeg ah leh
Ururuka maamula abaalmarinnada Oscars ayaa kulan degdeg ah leh si ay uga baaraan dagaan doorka uu mustaqbalka yeelan doono Harvey Weinstein, arrintaas oo dabo socota eedaymaha tacadiyada galmada ee loo soo jeediyay. Akaadeemiyadda hormarinta aflaanta ee The Academy of Motion Picture Arts and Sciences ayaa sheegtay in tacadiyada galmada ee loo haysto Weinstein ay yihiin...